Microstation-Bentley - Bogga 3 - Geofumadas
News Bentley Newsletter Latin America
Laga soo bilaabo Madaxweyne ku-xigeenka Bentley ee Latin America, Alfredo Castejón wuxuu nala soo xiriirayaa daabacaadda koowaad qaabkan isgaarsiinta: Waxaan daah furaynaa marxalad cusub oo aan kula xiriiri karno Isticmaalayaashayada iyada oo loo marayo warsidahan daqiiqad ka mid ah taariikhda Bentley oo aan xusuusan doonno sannado badan. Waa daqiiqad markii ...
Wax soo saarka weyn ee Bentley Systems ayaa ilaa hada, Microstation, ProjectWise iyo AssetWise waxaana laga helayaa dhamaanba dalabkan oo la gaarsiiyay aagaga kala duwan ee Geo-Engineering. Sidaan kuu sheegay sanad ka hor, Bentley waxay ku dartay sharad afraad waxa ay ugu yeedhay Connnect. Inta udhaxeysa bilaha May iyo ...
Faylka GML waa mid ka mid ah qaababka ay aadka u qadarinayaan horumariyeyaasha GIS iyo isticmaaleyaashu, maaddaama ay u tahay qaab ay taageerayaan oo ay jaangooyaan OGC, wuxuu si aad ah ugu shaqeynayaa wareejinta iyo isdhaafsiga xogta ee barnaamijyada websaydhka. GML waa codsi ee luqadda XML ujeeddooyinka geospatial, soo gaabinta waxay u taagan tahay ...
Raadi oo Bedelaan Isticmaalka Hadiyadaha joogtada ah: Microstation
Raadi oo beddel waa shaqo inta badan la isticmaalo, waligey baan ugu sharxay Excel. Markaad ku codsaneyso khariidaynta ama CAD, fursadaha helitaanka waxa aan raadineyno si sax ah ayaa ka dhib badan, maadaama aysan ahayn kaliya raadinta sifooyinka. Dhibaatada, bedelida qoraalada waxaan hayaa khariidad ka badan 800 ...
Nofeembar 6, abaalmarinta sanadlaha ah ee dhiirrigelinta dhiirrigelinta waxaa lagu qaban doonaa London. Taariikhdaani waxay la jaanqaadi doontaa shirka ku saabsan teknolojiyadda ee lagu dabaqay maareynta kaabayaasha caqliga, kaas oo noqon doona Talaado, Arbaco iyo Khamiis. Halkan, kuweenna kaqeybgalaya Shirka waxay kaqeyb geli karaan 6 kulan oo xiiso leh, oo kusaleysan Himilada Mustaqbalka, ...
Adeegyada khariidadda websaydhka waxaa loo yaqaan 'vector' ama Raster cartography oo la geynayo oo laga adeegsado internetka ama intranet iyadoo la adeegsanayo heerka WMS ee ay kor u qaadday TC211 Commission ee OGC, Open Geospatial Consortium. Ugu dambeyntiina, waxa adeegani qabtaa waa inuu muujiyo hal ama dhowr lakab oo ah sawir leh astaan ​​iyo hufnaan in ...
Brazil oo indhaha ku haysa "Sannadka Kaabayaasha" ee soo socda "
2004 Bentley Systems waxay bilaabeen munaasabad sanadle ah oo loo yaqaan 'Be Awards', taas oo markii dambe loo bixiyay Be Inspired. Marka laga soo tago xafladda abaalmarinta fudud, sanadihii la soo dhaafay waxaan aragnay in Baltimore Symposium uu noqdo Shir heer sare ah oo kaliya isticmaalka tikniyoolajiyadda loogu talagalay qaabeynta, naqshadeynta ...
Bentley wuxuu ku dhawaaqay 2013 Mashruucii Ugu Danbeyn ee Abaalmarinta Abaalmarinta
Xulista guuleystayaasha iyo xafladda abaalmarinta waxay ka dhici doontaa Shirka Sannadlaha ah ee Kaabayaasha Dhaqaalaha 2013, oo ka dhici doona 29 ilaa 31 Oktoobar magaalada London (Boqortooyada Ingiriiska). Bentley Systems, Incorporated, shirkadda hogaamineysa ee u heellan bixinta xalal dhammaystiran oo softiweer ah oo loogu talagalay kaabayaasha waarta, ayaa maanta ku dhawaaqday mashaariicdii ugu dambeysay ee loogu ...
Boggii hore Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 ... Page 15 page Next